Jereo ny toetran'ny alika Shih Tzu | Alika Manerantany
Susy fontenla | | Taranaky ny alika
Este alika fiaviana sinoa Izy io dia santionany kely iray izay mandresy ny olon-drehetra amin'ny endriny mahafinaritra sy ny toetrany tsara. Ny Shih Tzu dia nantsoina tamin'ny teny sinoa hoe 'alika liona', satria namboarina hitovy liona izy, na dia lavitra ny liona aza ny habeny.
Amin'izao fotoana izao dia a alika izay nanjary malaza be amin'ny toerana toa an'i Angletera. Ny habeny dia mahatonga azy io ho mendrika amin'ny karazana trano rehetra ary ny fitondran-tenany dia miantoka ny fitiavan'ny fianakaviana iray manontolo. Mizara toetra maro amin'ireo Pekingese sy Lhasa Apso ireo alika ireo ary malaza be.
1 Tantaran'i Shih Tzu
3 Toetra alika
4 Fikarakarana Shih Tzu
5 Fahasalamana alika
6 Maninona no mitazona Shih Tzu ao an-trano
Tantaran'i Shih Tzu
Ny tena niandohan'ity karazany ity, fantatra ihany koa amin'ny 'alika liona' na 'alika chrysanthemum'. Toa efa nisy alika mitovy amin'izany tamin'ny taona VII talohan'i JK avy amin'ireo sary hosodoko hita. Nampahafantarina an'i Sina izy io nandritra ny tarana-mpanjaka Tang. Tao Tibet dia notezaina ho andriamanitra bodista izy, noho ny fisehoany ivelany. Ireo alika ireo dia notezaina tao amin'ny tanàna voarara. Nandritra ny kaominisma dia samy nanjavona avokoa na ny karazana alika an-trano hafa, satria noheverina ho rendrarenan'ny saranga ambony izy ireo. Nandritra ny taonjato faha-XNUMX, nanjary nalaza tany amin'ny kaontinanta eropeana ireo alika ireo, izay niantoka ny fitohizan'ny karazany sy ny fielezany tany amin'ny firenen-kafa. Ankehitriny dia karazany alika malaza eran'izao tontolo izao izy io, izay mety amin'ny trano kely noho ny habeny.
El Alika Shih Tzu dia kely, miaraka amin'ny haavon'ny 26 santimetatra eo ho eo. Somary lava kokoa noho ny hahavony izy ary manome endrika mampihomehy. Kely ny lohany raha misy ifandraisany amin'ny vatany ary manana maso lehibe sy vava fohy izy. Kely ny sofiny fa volo be, izay manome azy fijery liona kely. Lava ny volony, na amin'ny tarehy na amin'ny vatana, ka tsy maintsy mitandrina foana. Izy io dia manana rambony lava miforitra ao an-damosina. Ny lokon'ny volony dia misy alokaloka volamena, fotsy ary volontany maro.
Ny Shih Tzu dia alika mety indrindra ho an'ny karazana fianakaviana rehetra, izay afaka mampifanaraka ny karazan-tontolo iainana. Afaka mankafy trano iray misy zaridaina sy trano kely ianao. Ny alika manana toetra tena tsara izy amin'ny toetrany, manamora ny fifandraisana aminy. Alika izay milalao ny tenany hilalao ary matetika dia manana toe-po tena tsara rehefa miaraka amin'ny fianakaviany. Ho alika izy izay hahatonga antsika hankafy ny fiarahany isan'andro. Rehefa zanak'alika izy ireo dia mety hahatonga azy ireo tsy ho voafehy ity lafiny ity.
Izany dia alika marani-tsaina sy mifoha tsy ho ela akory vao hahalala ny baiko. Izy io dia karazany iray izay mety somary maditra, noho izany dia tsy maintsy manam-paharetana isika ary ambonin'izany dia manao fanazaran-tena isan'andro amin'izy ireo mba hanatsarany ny toetrany. Ny fanabeazana ny alika dia tsotra, satria mianatra haingana izy ary alika manana toetra tsara. Raha haintsika ny mijoro tsara eo anoloan'ny ditrany tsindraindray, dia hanana alika mpankato isika.
Este mailo hatrany ny alika. Na dia alika kely aza dia biby mpiambina tsara. Mampitandrina ny fianakaviana amin'ny fisian'ny olon-tsy fantatra izy io ary ho alika be herim-po izay vonona hiaro ny azy. Tsy midika izany fa alika mahery setra, fa mahery sy mahatoky.
El alika dia tsy maintsy mifanerasera amin'ny alika hafa sy ny olona. Alika manana toetra tsara sy tia fiaraha-monina izy io, na izany na tsy izany tsy maintsy mianatra mifandray. Ho mora amin'ny alika ny mianatra mifanerasera sy miaraka amin'ny ankizy sy ny biby hafa.
Fikarakarana Shih Tzu
Mila ity alika ity fikarakarana manokana indrindra amin'ny palitao. Ny volony dia nitombo hatramin'ny naha-puppy azy. Palitao somary lava izy io izay mila fikarakarana fikarakarana be dia be. Tsy maintsy mividy sisiny manokana ho an'ny volo lava izay tsy manimba na mamaky palitao. Tokony kosehina sy esorina isan’andro izany mba hisorohana ireo knot sy dreadlocks. Mazava ho azy fa raha lava ny palitao dia tsy maintsy hiasa bebe kokoa isika. Safidy iray hafa ny manapaka ny volonao amin'ny mpanao volo mba hahafahanao manamboatra azy io mora kokoa mandritra ny vanim-potoana iray. Rehefa mitafy volo lava ilay alika dia esory tsy ho eo amin'ny tarehiny izy satria mety hanelingelina ny masony izany.
ny ny maso lehibe dia mety hiteraka olana sasany, noho izany dia tsy maintsy sorohinao sao manelingelina ny volo. Tokony hodiovintsika izy ireo raha hitantsika fa manana loto izy ireo ary mijery azy ireo raha voan'ny aretina. Olana ho azy ireo ihany koa ny vavam-baravaran'izy ireo fohy, satria mety hanana olana amin'ny fisefoana izy ireo ary indraindray aza miesona.
Ny alika Shih Tzu dia biby izay salama tsara, satria 13 taona eo ho eo ny androm-piainan'izy ireo. Misy aretina maromaro mety hitranga amin'ny alika, toy ny entropion, atrophy retinalie miandalana na ny hip dysplasia. Ny sofiny floppy sy ny volony be dia be koa dia mety ho olana mitarika azy hijaly amin'ny otitis.
Su sakafo dia tsy maintsy ho tsara hikarakara ny palitaony ary tsy maintsy manao spaoro isan'andro izy mba ho alika mahay mandanjalanja sy salama tanteraka. Matetika manana kibo marefo izy ireo, saingy amin'ny fahana matanjaka dia tsy hanana olana izy ireo raha ny sakafo no resahina.
Maninona no mitazona Shih Tzu ao an-trano
Alika Shih Tzu manintona izy ireo raha vantany vao mifanena aminy ianao. Ny fisehoan'izy ireo ny biby kely feno enta-mavesatra dia mahatonga ny tsirairay mankafy azy ireo hatramin'ny fotoana voalohany, fiheverana izay hamafisin'ny toetrany tsara sy ny toetrany milalao. Alika tsara ho an'ny trano misy ankizy izy io, satria hankafy ny lalao ny tsirairay. Alika mora fampiofanana izy io ary mampiseho faharanitan-tsaina lehibe. Ny habeny dia mahatonga azy io ho alika tonga lafatra ho an'ny trano kely sy karazana trano rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Taranaky ny alika » Shih Tzu